Ovaovao ny Feonao | Mamaky Teny & Mampianatra
Ovaovao ny Feonao
Ohabolana 8:4, 7
AHOANA IZANY? Ovaovao ny haavon’ny feonao sy ny hafainganany, mba hazava tsara izay hevitra resahinao sady hanohina ny fo.
Ovaovao ny haavony. Mitenena mafy kokoa rehefa manasongadina hevi-dehibe na ny haben’ny zavatra iray na ny halavirany, na koa rehefa mampirisika ny olona hampihatra an’izay lazainao, na rehefa mamaky didim-pitsarana ao amin’ny Baiboly. Ho hita koa hoe mafana fo ianao raha miteny mafy. Mitenena mora kosa rehefa miteny zavatra mampahatahotra na mampalahelo, na alohan’ny hitenenana zavatra mahaliana.
Aza ampiakarina matetika loatra ny feonao, sao hoeritreretin’ny olona hoe masiaka ianao. Aza ampiakarina be loatra na ampidinina be loatra koa ilay izy, sao lasa ianao indray no hifantohan’ny olona, fa tsy izay lazainao.
Ovaovao ny hafainganany. Mitenena haingana kokoa rehefa milaza zavatra mahafaly. Mitenena miadana kosa rehefa milaza hevitra tena lehibe.
Aza miteny haingana be tampoka, sao manaitra olona. Aza miteny haingana loatra koa, sao dia tsy ho azon’ny olona ny teninao.
Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Ovaovao ny Feonao